Anbotek Automotive New Materials & Components Lab bụ ụlọ ọrụ nyocha nke atọ nke ọkachamara na nyocha ngwaahịa metụtara ụgbọ ala. Anyị nwere ngwa ọrụ nnwale zuru ezu, mmepe ọgbara ọhụrụ na ndị otu nnwale, ma gbalịsie ike na-enyere ụlọ ọrụ niile aka na ụlọ ọrụ ụgbọ ala na-emeziwanye arụmọrụ ma belata ihe egwu, site na mmepe ngwaahịa, mmepụta, mbupu ọrụ ahịa, maka akụkụ niile nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala yinye. Nye ezigbo nlekota oru mgbe ị na-enye ngwọta maka ọtụtụ nsogbu mara na nke zoro ezo.
Ngwa ụlọ nyocha, ụlọ nyocha ọkụ, ụlọ nyocha igwe, ụlọ nyocha combustion, ụlọ nyocha ntachi obi, ụlọ nyocha ísì, ụlọ nyocha VOC, ụlọ nyocha atomization.
• Akụrụngwa akụrụngwa: plastik, roba, agba, teepu, ụfụfụ, akwa, akpụkpọ anụ, ihe igwe, mkpuchi.
• Akụrụngwa akụrụngwa: akụrụngwa akụrụngwa, ihe njikwa etiti, ọnụ ụzọ, kapeeti, uko ụlọ, ikuku ikuku, igbe nchekwa, aka ọnụ ụzọ, ogidi ogwe aka, ihu ụzọ, anwụ anwụ, oche.
• Akụrụngwa mpụga mpempe akwụkwọ: n'ihu na azụ bumpers, ikuku mbanye grille, n'akụkụ sills, uprights, rearview enyo, akara ibe, ọdụ nku, spoilers, wipers, fenders, housings, oriọna oriọna.
• Akụrụngwa akụrụngwa: ọkụ, motọ, igwe ntụ oyi, wipers, switches, mita, ndị na-anya ụgbọala, igwe dị iche iche elektrọnik, sensọ, okpomoku ọkụ, eriri wiwi.
• Ihe arụmọrụ ule (plastic Rockwell ekweghị ekwe, Shore ekweghị ekwe, teepu esemokwu, linear eyi, wheel eyi, button ndụ, teepu mbụ tak, teepu ejide tack, agba film mmetụta, gloss ule, film mgbanwe, 100 okporo ule, mkpakọ set, pensụl ekweghị ekwe, ọkpụrụkpụ mkpuchi, elu resistivity, olu resistivity, mkpuchi mgbochi, iguzogide voltaji), Light ule (xenon oriọna, UV).
• Mechanical Properties: tensile stress, tensile modulus, tensile strain, flexural modulus, ike mgbanwe, nanị akwado doo mmetụta ike, cantilever mmetụta ike, bee bee, adọka ike, teepu bee ike.
• Kwes arụmọrụ ule (gbazee index, ibu okpomọkụ distortion okpomọkụ, Vicat softening okpomọkụ).
• Combustion arụmọrụ ule (ụgbọala n'ime combustion, kwụ vetikal ọkụ, electric leakage nsuso, bọl mgbali ule).
• Auto akụkụ ike ọgwụgwụ na ndụ ule (esiri-torsion ọtụtụ ndị mejupụtara ike ọgwụgwụ ule, akpakanamde n'ime ahụ ntachi obi ule, automotive Nchikota esịtidem mgba ọkụ ntachi obi ule, automotive ntuziaka breeki ntule ule, button ndụ ule, nchekwa igbe ntachi obi ule).
• Udo ule (isi ike, isi ike, isi ike).
• VOC ule (aldehydes na ketones: formaldehyde, acetaldehyde, acrolein, wdg; usoro benzene: benzene, toluene, ethylbenzene, xylene, styrene, wdg).
• Nnwale atomis (usoro gravimetric, usoro gloss, usoro haze).